Fandringanana ireo mpizahatany any Torkia any amin'ny faritra fialantsasatra ao Antalya
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Madagascar Malgache Vaovao » Fandringanana ireo mpizahatany any Torkia any amin'ny faritra fialantsasatra ao Antalya
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Madagascar Malgache Vaovao • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny doro ala any Torkia dia mitarika ny famindran-toerana ny fizahan-tany any Bodrum sy Marmaris
Ny faritra Antalya sy ireo toeram-pialan-tsasatra malaza dia tandindomin-doza noho ny hain-trano mampidi-doza ny mpitsidika sy ny mponina amin'ny faritra fialantsasatra ao atsimon'i Torkia.
Afo ratsy indrindra tany Bodrum sy Marmaris, Torkia
Voadidy ny famoahana toerana any amin'ireo tanàn-dehibe resahin'i Torkia, Bodrum sy Marmaris.
Ny doro ala dia may be eo akaikin'ny trano sy trano fandraisam-bahiny.
Ny Navy Tiorka dia mandray anjara amin'ny ady amin'ny doro ala.
Ny doro tanety any Torkia dia namely ny tanàna fialantsasatra ao Marmaris ary ambany rihana. Ny manampahefana ao an-toerana dia nandidy ny famoahana ireo mpizahatany sy ny mponina ao an-toerana.
Ny afo dia nipoitra tamina faritra vitsy mponina manodidina ny 75 kilaometatra atsinanan'ny Antalya, tanàna fialantsasatra malaza indrindra izay malaza amin'ny Rosiana sy ireo mpizahatany eoropeana atsinanana hafa, fa koa ny Alemanina.
Saingy nandady akaiky kokoa ny alakamisy izy ireo nankany amin'ny morontsiraka fasika feno hotely sy hotely.
Ny sary tao amin'ny media sosialy sy ny fahitalavitra Tiorka dia nampiseho ireo mponina nitsambikina niala ny fiarany ary nihazakazaka namonjy ny ainy namakivaky ny arabe feno setroka nirehitra tamin'ny lelafo volomboasary.
Noho ny hain-trano mafy dia nafindra tany Marmaris ny olona voalohany.
May tokoa ny ala akaikin'ny trano sy trano fandraisam-bahiny.
Ny mpizahatany sasany dia milalao baolina eny amoron-dranomasina hatrany, na inona na inona afo
Ny minisitry ny fambolena sy ny ala any Tiorka Bekir Pakdemirli dia nilaza fa angidimby dimy, fiaramanidina iray, ary milina mpamono afo 30 no miady amin'ny afo mahatsiravina any an-toerana.
Ny afo vaovao indrindra dia hita ao amin'ny tanànan'i Bodrum. Afindra toerana ny olona. Ny singa ao amin'ny tafika an-dranomasina Tiorka dia mirotsaka amin'ny fikasana mafy hamelona ny afo.
Ny doro tanety ankehitriny, izay natanjaka indrindra tato ho ato, dia nanomboka noho ny hafanana tao amin'ilay faritra. Hatreto dia olona efatra no maty tamin'ny loza ary 183 no voan'ny setroka.
Talohan'izay dia nilaza ny minisitry ny fizahan-tany tiorka Mehmet Nuri Ersoy fa nihemotra ny afo avy tany amin'ny hotely sy trano.
Hoy ny minisitra: "Satria natao ara-potoana ny fitsabahana ary tamin'ny fampiasana fitaovana marobe, nosakanana ny fiparitahan'ny afo nankany amin'ny morontsiraka. Nikatona ny lalana mankamin'ny faritra fizahan-tany. ”
ankehitriny, ambany rihana no ivon-toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny varotra, ny zavakanto ary ny fialamboly toy ny efa hatramin'ny taonjato maro lasa izay… Ity tanàna amoron-dranomasina izay ifanarahan'ny fiainana nentim-paharazana sy ankehitriny ity dia mirindra tsara ho an'izay te-hahafantatra miaraka aminy ary miaina azy.